Ahụike: ahụ riri ahụ | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Health Iri Mmadụ Ahụ
Iji ike eme ihe ike n'agbanyeghị nsogbu na-adịghị mma bụ njirimara nke iri mmadụ ahụ. Nke ahụ pụtara na ọbụlagodi mgbe ahụ riri ahụ na-akpata enweghị ọrụ, mmebi mmekọrịta, nsogbu akụ na ụba, inwe nkụda mmụọ na enweghị njikwa, anyị ka na-ebute ụzọ omume riri ahụ ma ọ bụ ihe karịrị ihe ọ bụla ọzọ na ndụ anyị.
Nkọwa dị mkpirikpi nke ịṅụ ọgwụ ọjọọ nke American Society of Addiction Medicine nyere bụ:
Ịṅụ ọgwụ ọjọọ bụ ọrịa mbụ na ọrịa na-adịghị ala ala nke ụgwọ ụbụrụ, mkpali, ncheta na mgbakọ yiri nke ahụ. Nkwụsịtụ na nchịkọta ndị a na-eduga na njirimara ihe omumu, nke uche, nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nke a gosipụtara na onye ọ bụla na-achọ ụgwọ ọrụ na / ma ọ bụ enyemaka site na iji ihe na àgwà ndị ọzọ.
A na-ejikarị nkwarụ na-enweghị ike ịnọgide na-ezere, enweghi ntụpọ na njide omume, agụụ na-agụsi ike, nhota mmetuta nke nsogbu dị mkpa na omume onye na mmekọrịta onye ọ bụla, na mmeghachi omume mmetụta uche na-adịghị mma. Dịka ọrịa ndị ọzọ na-adịghị ala ala, ihe riri ahụ na-agụnyekarị oge nlọghachi na nkwụsị. Na-enweghị ọgwụgwọ ma ọ bụ aka aka na mmeghachi omume, ihe riri ahụ na-aga n'ihu ma nwee ike ịkpata nkwarụ ma ọ bụ ọnwụ akaghi aka.
Òtù American Society of Addiction Medicine na-arụpụta Ọdịnihu Ogologo. Nke a na-ekwu banyere ahụ riri ahụ n'ụzọ zuru ezu ma nwee ike ịchọta ya Ebe a. A kọgharịrị nkọwa ahụ na 2011.
Ictionụ ọgwụ ọjọọ bụ nsonaazụ nke usoro mgbanwe na usoro ụgwọ ọrụ ụbụrụ. Rewardgwọ ọrụ ụgwọ ọrụ n'ụbụrụ anyị malitere iji nyere anyị aka ịlanarị site na ime ka anyị chọọ ụgwọ ọrụ ma ọ bụ obi ụtọ, zere ihe mgbu, yana obere ihe niile nwere ike ime ma ọ bụ tinye ike. Anyị na-ahụ ihe ọhụụ n'anya, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịnụ ụtọ obi ụtọ ma ọ bụ zere mgbu na obere mbọ. Nri, mmiri, njikọta na mmekọahụ bụ ụgwọ ọrụ dị mkpa anyị mepụtara iji chọọ iji lanarị. Ihe elekwasị anya na ha malitere mgbe ihe ndị a dị ụkọ, yabụ anyị na-enwe ọ pleasureụ mgbe anyị hụrụ ha. Omume a na-adị ndụ na-akpali site na neurochemical dopamine, nke na-emekwa ka okporo ụzọ ndị na-adịghị ike na-enyere anyị aka ịmụta ma megharịa omume ahụ. Mgbe dopamine dị ala, anyị na-agba ume ịkpali anyị ịchọ ha. Ọ bụ ezie na ọchịchọ ịchọrọ ụgwọ ọrụ sitere na dopamine, mmetụta nke obi ụtọ ma ọ bụ euphoria site na ịnweta ụgwọ ọrụ na-esite na mmetụta neurochemical nke opioids eke na ụbụrụ.
Taa n'ime ụwa anyị bara ụba, anyị na-atụgharị n'ụdị 'supernormal' nke ụgwọ ọrụ sitere n'okike dị ka esichara, ihe oriri na-eri kalori na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị. Ndị a na-eme ka ụbụrụ nwee mmasị na ihe ọhụrụ na agụụ maka ihe ụtọ na obere mbọ. Ka anyị na-eri ihe ndị ọzọ, ọnụ ụzọ ebumnuche anyị na-ebili ma anyị na-ahụ ndidi ma ọ bụ enweghị mkpali site na ọkwa ndị gara aga. Nke a n'aka na-eme ka mkpa anyị dịkwuo ike iji nwee afọ ojuju, ọbụlagodi nwa oge. Ọchịchọ na-agbanwe n'ime ihe achọrọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị na-amalite 'ịchọ' omume karịa ka anyị 'masịrị ya' dị ka amaghị ihe, ụbụrụ metụtara ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na-achịkwa omume anyị ma anyị agaghị enwe nnwere onwe ime nhọrọ.
Ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke ọma, ụgwọ ọrụ 'obere' dịka shuga dị ọcha, mmanya na-aba n'anya, nicotine, cocaine, heroin na-ejikwa usoro ụgwọ ọrụ. Ha na-abanye n'okporo ụzọ dopamine maka maka ụgwọ ọrụ nkịtị. Dabere na usoro onunu ogwu, ụgwọ ọrụ ndị a nwere ike mepụta obi ụtọ ma ọ bụ ọ orụ siri ike karịa nke ahụ nwere ụgwọ ọrụ nkịtị. Nke a gabigara ókè nwere ike ịtụfu usoro ụgwọ ọrụ anyị. Bụrụ ga-arapara n’ihe ma ọ bụ omume ọ bụla na-enyere aka belata nrụgide. Brabụrụ anyị agbanwebeghị iji nagide ibu a na-abawanye ụba na sistemụ ahụ.
Mgbanwe ụbụrụ anọ dị iche iche na-agbanwe n'ime usoro ọgwụ ahụ.
Nke mbụ, anyị enweghịzi ihe ụtọ nkịtị. Obi anaghị adị anyị ụtọ n'ihe niile anyị na-enwe kwa ụbọchị, bụ́ ihe ndị na-emebu anyị obi ụtọ.
Ihe na-eri ahụ ma ọ bụ omume na-eri ahụ na-arụ ọrụ na isi mgbanwe nke abụọ, 'sensitization'. Nke a pụtara na kama ịnụ ụtọ ihe ụtọ sitere n'ọtụtụ ebe, anyị na-elekwasị anya n'ihe anyị chọrọ ma ọ bụ ihe ọ bụla na-echetara anyị ya. Anyị kwenyere na anyị nwere ike ịnweta afọ ojuju na anụrị naanị site na ya. Anyị na-ewulite ndidi dịka anyị ga-eji ọkwa dị elu nke na-egbochi ahụ erughị ala nke iwepụ ya.
Mgbanwe nke atọ bụ 'hypofrontality' ma ọ bụ mmebi na belata ọrụ nke ihu ihu ihu nke na-enyere aka igbochi omume ma mee ka anyị nweere ndị ọzọ ọmịiko. Ihu ihu ihu bụ brekị na-ejide omume anyị kwesịrị ijikwa. Ọ bụ akụkụ nke ụbụrụ ebe anyị nwere ike itinye onwe anyị na akpụkpọ ụkwụ nke ndị ọzọ iji nweta echiche ha. Ọ na-enyere anyị aka ịdị na-emekọ ihe ma na-emekọrịta nke ọma na ndị ọzọ.
Mgbanwe nke anọ bụ ịmepụta usoro nhụjuanya dysregulated. Nke a na-eme ka anyị nwee nrụgide na nrụgide dị mfe, na-eduga n'omume na-agwụ aghara na mkpasu iwe. Ọ bụ iche na nkwụsị na ike iche echiche.
Ụ ọgwụ ọjọọ na-esi na ya pụta ugboro ugboro na iji ọgwụ ọjọọ eme ihe (mmanya, nicotine, heroin, cocaine, skonku wdg) ma ọ bụ omume (ịgba chaa chaa, ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ, egwuregwu, ịzụ ahịa, iri nri ratụ ratụ) nke na-akpata mgbanwe n'ụdị ụbụrụ na ịrụ ọrụ . Bụrụ onye ọ bụla dị iche, ụfọdụ ndị chọrọ mkpali karịa ndị ọzọ iji nweta obi ụtọ ma ọ bụ bụrụ ndị riri ahụ. Ilekwasị anya na ikwughachi otu ihe ma ọ bụ omume ugboro ugboro na-egosi ụbụrụ na ọrụ a adịla mkpa maka nlanarị, ọbụlagodi mgbe ọ na-adịghị. Bụrụ na-achịkwa onwe ya iji mee ka ihe ahụ ma ọ bụ omume ahụ bụrụ ihe kacha mkpa ma na-eweda ihe ọ bụla dị na ndụ onye ọrụ ahụ ala. Ọ na-ebelata echiche mmadụ ma na-ebelata ndụ ha. Enwere ike ịhụ ya dị ka ụdị 'ịmụ ihe' mgbe ụbụrụ na-arapara na usoro nzaghachi nke omume ugboro ugboro. Anyị na-aza na akpaghị aka, na-enweghị mgbasi mbọ ike, na ihe gbara anyị gburugburu. Nke a bụ ihe kpatara anyị ji chọọ lobes dị mma iji nyere anyị aka iche echiche nke ọma banyere mkpebi anyị ma zaghachi n'ụzọ ga-akwalite ọdịmma anyị ogologo oge ma ọ bụghị naanị mkpirikpi oge.
N'ihe banyere ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na ịntanetị, naanị ịhụ laptọọpụ, mbadamba nkume ma ọ bụ smartphone na-egosi onye ọrụ na obi ụtọ bụ 'n'akụkụ akuku'. Atụmanya nke ụgwọ ọrụ ma ọ bụ enyemaka site na mgbu na-akpali omume ahụ. Cagbaba na saịtị ndị mmadụ hụrụ na mbụ "ihe arụ ma ọ bụ na ha adabaghị agụụ mmekọahụ ha" bụ nke ọkara na ndị ọrụ. Addiction addictionụ ọgwụ ọjọọ zuru oke na ahụike adịghị mkpa iji mee ka ụbụrụ gbanwee nke na-emepụta nsogbu uche na nke anụ ahụ dị ka ụbụrụ ụfụ, nkụda mmụọ, nkewapụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mmụba, nchekasị nke ọha mmadụ, nsogbu nsogbu erectile, itinye uche na ọrụ na enweghị ọmịiko. maka ndị ọzọ.
Ịchụso ọrụ ọ bụla dopamine na-arụ ọrụ nwere ike ịghọ onye na-agbagha site na ịgbanwe ihe ụbụrụ anyị na-aghọta dịka ihe dị mkpa ma ọ bụ dị mma maka ọdịdị ya. Ụbụrụ a gbanwere na-emetụta mkpebi na àgwà anyị. Ozi ọjọọ ahụ bụ na ịmepụta otu riri ahụ nwere ike ibute ọgwụ ọjọọ na ihe ndị ọzọ ma ọ bụ omume. Nke a na - eme mgbe ụbụrụ na - anwa ịnọ n'ihu nrịbama mgbagha site na ịchọta ihe ụtọ, ma ọ bụ nsị dopamine na opioids, si n'ebe ndị ọzọ. Ndị na-eto eto bụ ndị kasị nwee ike ịṅụ ọgwụ ọjọọ.
Ozi ọma ahụ bụ na n'ihi na ụbụrụ bụ plastik, anyị nwere ike ịmụta ịkwụsị ịkwalite omume ọjọọ site n'ịmalite ọhụụ na ịhapụ àgwà ochie. Nke a na-eme ka ụzọ ụbụrụ ụbụrụ na-eme ka ọ ghara ịdị ọhụrụ. Ọ naghị adịrị mfe ịnweta ma na-akwado, a ga-eme ya. Ọtụtụ puku ndị ikom na ndị inyom agbakere site na ịṅụ ọgwụ ọjọọ ma nweere onwe ha nnwere onwe na nchụpụ ọhụrụ nke ndụ.
<< Ihe Ntughari di egwu Ahụhụ riri ahụ >>